Mpandika teny amin'ny Google Ads Mpandika teny Google Ads
Aza nametraka fetra ny raharaham-barotra ... na aiza na aiza tianao ambarao.
Hisarihana mpanjifa avy amin'ny anisan'izao tontolo izao
Hataoko maro ny takatry & raharaham-barotra fanentanana
Manitatra ny varotra - trondro 'en rehetra!
Manjary ho fantatra voalohany hoe rahoviana ny Google Ads Mandeha sy mpandeha ny mpandika teny!
Misaotra anao ny fisoratam! Dia mifandray anao raha vao misy izany vokatra izany.
Nisy zavatra tsy nety. Azafady, andramo indray tatỳ aoriana.
Oy nisy tsy nety! Azafady manoratra mailaka marim-pototra mba hisoratra anarana.
Clever Ads nandika ny Google Ads anao amin'ny fiteny rehetra eran-tany maimaimpoana
Select ny safidinao
Safidio ny Google Ads fanentanana tianao handika ary iza amin'ireo fiteny ireo.
Fidio ny teti-bola isan'andro
Apetraho manokana ny teti-bolanao ho an'ny tsirairay amin'ireo Google Ads nadika vao haingana Google Ads fampielezan-kevitra.
& Any no mandeha!
Ataovy hatrany ny fanentanana vaovao ataonao Google Ads tantara!
Handresy tontolo vaovao
Clever Ads ho an'ny manan-tsaina dia hamela anao hahatratra ANATIA, ANY ANAO
Afaka mandika izay Google Ads Fikarohana fikarohana amin'ireo fiteny efa misy eran'izao tontolo izao (azafady amin'ireo mpandika latinina).
Ampahafantaro ny orinasanao na aiza na aiza sy amin'ny toerana rehetra. Na tianao io dia any Etazonia, Sina, Mexico, Russia, na izy rehetra miaraka amin'ny iray manontolo. Ny lanitra dia fetra ary anao ny safidy!
Manana ny teny farany
Topazo maso ireo Google Ads nadikanao Google Ads fanentanana alohan'ny hampidirany azy ireo ao amin'ny Google Ads kaonty & ampandahatra ny teti-bola isanandro ho an'ny tsirairay amin'izy ireo.
Mahaiza mandinika sy manamboatra ireo dikanteny arak'izay tadiavinao amin'ny fampandehanana ny filànanao.
Nahoana fampiasana Clever Ads tsy manan-tsahala Google Ads mpandika teny?
Izahay tsy manam-paharoa
Clever Ads dia iray amin'ireo orinasa vitsivitsy izay hahafahanao mampivoatra ny orinasan-tsarinao mandritra ny fivarotana ny vokatrao na serivisinao, tsy misy vidiny akory. Aza avela hisy hanapaka ny elatrao, na aiza na aiza tianao aleha amin'ny alàlan'ny fandikana ny doka misy anao, eto no manampy ny Clever Ads .
Nisy afaka nilaza ve? Henonao tsara izany. Ny teti-bola nofidinao amin'ny fampielezankevitra vaovao ataonao dia laninao tanteraka amin'ny Google Ads . Hanao karama fotsiny ianao.
Ny fandikana ny fampielezan-kevitra Google Ads feno dia afaka maharitra ora maromaro na andro maromaro ho an'ny mpandika teny matihanina, azonao atao ny mandika azy ireo mandeha ho azy ao anatin'ny segondra miaraka amin'ny Clever Ads .